Fitsangatsanganana bus " Journey-Assist - Torohevitra mahasoa sy laykhaki mahasoa.
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » Fitsangatsanganana fitateram-bahoaka
Ny olona sasany tsy mahazaka ny fiaramanidina ary na ny sambo aza: ny sasany matahotra ny havoana, ny sasany mijaly noho ny hamamoana. Ho fanampin'izany, ny fitsangatsanganana mampiasa ireo karazana fitaterana ireo dia tsy azo antsoina hoe mora. Na izany aza, safidy hafa azo atao - fitsangatsanganana bus. Fitsangatsanganana fitateram-bahoaka - karazana fitsangatsanganana tena mahaliana. Mandritra ity fitsidihana ity dia afaka miampita sisin-tany maromaro ianao. Ao anatin'ny sehatry ny dia iray, azo atao ny mifankazatra amin'ny mason'ny renivohitra maromaro any amin'ny firenena eropeana, mampitaha sy manombatombana ny tsirairay. Mety te-hiverina eto indray ianao aorian'izay.
Tombotsoan'ny fitsangantsanganana fitateram-bahoaka
Fahadisoan'ny fitsangatsanganana amam-bisy
Inona no tokony horaisinao (torohevitra)
Ny tombony lehibe amin'ity fizahan-tany ity dia ny vidiny ambany.
Ny ampahany lafo vidy indrindra amin'ny dia rehefa mandeha fiaramanidina dia ny tapakila mihitsy.
Ohatra, fitsangatsanganana a bus mandritra ny herinandro ho any amin'ny firenena any afovoany Eoropeana, ao anatin'izany ny fitsidihana tanàna 2-3, trano fandraisam-bahiny, fitsangatsanganana, fitsangantsanganana, mitentina 300-400 euros (tsy tafiditra ao ny fandaniam-bola manokana) ary tapakilan'ny fiaramanidina 1, ohatra, mankany Prague na Vienna, mitentina 150 euros eo ho eo izany. (bebe kokoa, azonao atao ny mahita ny vidin'ny tapakila eto). Raha manampy 6 alina ao amin'ny hotely ianao ary fitsangatsanganana amin'io vola io, dia mihoatra lavitra ny vola lany amin'ny fitsangatsanganana bus ny vola lany. Ary koa, amin'ny fitsangatsanganana bus, ny vondrona dia miaraka amin'ny torolàlana tsara foana, izay tsy itehirizan'ny mpikarakara matetika.
Ny tombony faharoa amin'ny dia fitateram-bahoaka dia ny manintona maro. Raha firenena iray ihany no an'ny tanjon'ny dia, dia mbola azonao atao ny mijery ireo tanàna sy tanàna manodidina azy na toerana mahaliana sy malaza hafa, noho izany ny fahatakarana tanteraka ny toetra ara-kolontsaina sy ara-tantara an'ity firenena ity. Raha miresaka fitsangatsanganana amin'ny fomba "mandeha manerana an'i Eropa" isika, izay manarona firenena maro sy tanàna maro amin'ny fotoana iray, dia tsy misy karazana fizahan-tany hafa (raha mampitaha fonosana mahazatra izahay, farafaharatsiny) dia tsy afaka mifaninana amin'ny fitsangatsanganana bus.
Ary ny fahatelo, tombony lehibe. Raha toa ny programa fitsangatsanganana fiara fitateram-bahoaka miaraka amin'ny fitsidihana tranombakoka malaza (ohatra, ny Uffizi na ny Louvre), dia tsy ho lany andro amin'ny fizotran'ny filaharana ianao, satria ho an'ny vondrona mpizahatany voalamina dia misy fitsipika manokana momba ny lalana mifototra amin'ny famandrihana mialoha. Ny olona efa za-draharaha dia mahalala fa mamonjy fotoana sy ezaka be dia be io;).
Ny fatiantoka lehibe amin'ny fitsangatsanganana bus dia ny aotobisy mihitsy, na ny tena izy, ny zava-misy fa ny mpizahatany dia toa mifamatotra aminy. Rehefa dinihina tokoa, mihoatra ny antsasaky ny fotoana fitsangatsanganana rehetra dia tsy maintsy ao anatiny. Ity dia seza iray ary mpifanila vodirindrina iray (raha sendra misy ny tranga mety hitranga, azo atao ny mifanakalo mpiara-monina), olona iray miaraka ary orinasa iray mandritra ny andro. Raha mandritra ny andro voalohany dia tsy tianao ireo toe-javatra voalaza etsy ambony ireo dia tsy maintsy miaritra am-pahasahiana fotsiny ianao.
Raha ny sakafo, mazàna ny vidin'ny fitsangatsanganana bus dia ahitana sakafo maraina ihany amin'ny hotely. Noho izany antony izany dia mila noforonina ny tahiry sakafo. Toeram-piarovana ilaina izany, tsy afaka miantehitra amin'ny trano fisakafoanana ianao, satria amin'ny ankamaroan'ny tranga dia misy ny fiatoana eo anelanelan'ny foibe na any amin'ny fivarotan-trano ao amin'ny lalambe, izay matetika no mampanahy ny kalitao.
Raha mora voan'ny "mivezivezy" ianao amin'ny fitaterana dia tsy ho anao io fomba fitsangatsanganana io.
Ny mpanaradia tsy maintsy iaraha-miaina aminao dia fatiantoka ihany koa. Saingy misy fepetra io minus io, satria miankina amin'ny vintana ny zava-drehetra eto: ny olona manan-tsaina ampy, ny mpisotro toaka ary mora resadresaka mafy dia mety ho mpifanolo-bodirindrina aminy.
Torohevitra momba ny mpandeha izay mikasa ny fitsangatsanganana bus
Ny endrika tsara indrindra amin'ny fitsangatsanganana bus dia ny tahan'ny "andro iray = tanàna iray". Io dia ahafahanao mitahiry tanjaka ara-batana ary mahita manintona maro.
Manoro hevitra izahay fa handeha amin'ny fitsangatsanganana an-trano fotsiny amin'ny zotram-by any Eoropa maoderina (Mercedes-Benz, Vdl bova, neoplan, Man et al.). Izy io dia fitaterana mampitony, matetika ampiana fitaovana sy horonan-tsarimihetsika, fitaovana fandraisam-bahiny, fidiovana sy trano fanaovana kafe ary mpanamboatra kafe, na trano fidiovana. Ny seza eo dia tsy vitan'ny hoe mikajy fotsiny, fa mifindra miadana ihany. Ny seza dia am-paosy 220v.
Rehefa mividy fitsidihana, dia tokony hanontany ny mpitantana ny orinasa fitsangatsanganana hoe inona ny fiara fitaterana inona no atolotra ho an'ny fijanonana ny tena fitsangatsanganana, ny fotoana farany nanarenana izany. Raha tsy izany, raha tokony ho traikefa nahafinaritra, dia ho voatery hijoro eo amin'ny sisin-dàlana ianao, miandry ny mpamily hanaikitra zavatra hianjera.
Tokony ho fantatrao koa hoe inona ny serivisy ho eny an-tsambo. Misy Wi-Fi ve, ve ireo seza azo ampiana famafazana 220v.
Hamarino raha tiana ny fihodinana amin'ny alina. (ny fandefasana alina dia ahafahanao manangona vola ao amin'ny hotely, saingy tokony hiomana ianao amin'ny fahatsapana fa mandreraka be tokoa, ary tsy afaka mijanona amin'ny fialan-tsasatra tsara ianao rehefa mihetsika amin'ny alina!
Hamarino raha tafiditra ao amin'ny vidiny ny fitsangatsanganana.
Manandrama ahitanao ny firafitry ny tarika amin'ny vanim-potoana. Mila miomana ianao satria mandre matetika ny tanora fa tsy mitongilana.
Aza adino fa amin'ny andalana eo amin'ny fiara fitaterana dia miharatsy ny aretina.
Inona no tokony horaisinao amin'ny fitsidihana bus
Amin'izao toe-javatra izao dia amin'ny ririnina, dia ilaina ny mitehina amin'ny kiraro mafana, bodofotsy, ondana kely. Io dia mamela anao handefitra famindrana amin'ny alina, satria ny fitsidihan'ny fiara fitateram-bahoaka sasany dia manome ho azy ireo.
Mety mitombina ny manampy boky, mpilalao iray, vatan-jamba, sofina mihidy amin'ny entanao.
Tokony ho ao an-tsaina fa any an-dalana matetika (noho ny vovoka na ny fantson-tserin'ny bus) dia misy tenda. Ho an'ny toe-javatra toy izany dia tena tokony haka vatomamy na zavatra toy ny "chill" ianao.
Tsy tokony hatao ny maka sakafo be. Ny tena vatsy dia ny serealy maina sy lasopy, kitapo kafe sy dite, sôkôla ary voanjo.
Mety mila boiler koa. Boaty misy kojakoja ary mazava ho azy takiana koa ny antsy sy ny sotro.
Kitapo fitsangatsanganana misy band-aid, iodine, antibiotika, fanafody amin'ny fivontosana gastrointestinal, analgesika dia tokony hipetraka ao anaty valizy.
Ny zavatra ilaina dia misy navigateur napetraka ao anaty telefaona (raha sendra tafasaraka tsy nahy tamin'ny vondrona ianao), PowerBank.
Ny fitsangatsanganana bus dia iharan'ny lalàna sasany. Fady mafy ny miala amin'ny bus rehefa miampita ny sisintany, manandrana manomboka resaka amin'ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta, maka sary sy horonantsary - ity farany dia feno fakana fitaovana ara-dalàna tanteraka, izay tsy azo averina.
Toy ny fitsipika, amin'ny orinasan-dia, alohan'ny fitsangatsanganana bus, dia atoro ny mpizahatany mba handray vola amin'ny fandaniam-bola kely amin'ny vola $ 500. e. Inona no azon'izy ireo ampiasaina? Voalohany indrindra - ho an'ny sakafo. Matetika, ao anatin'ny fitsangatsanganana bus, ny hotely dia omena sakafo maraina fotsiny, ary ny sakafo atoandro sy ny sakafo hariva dia tsy maintsy aloa isan-karazany. Ho an'ny sakafo atoandro tsara any amin'ny firenena eropeana, misy dikany ny manokana 15 $ eo ho eo, amin'ny sakafo hariva - $ 20 (tsy misy alikaola).
Ny fitsangatsanganana bus dia iray amin'ireo safidy fizahan-tany turnkey lafo vidy indrindra. Ireo mpizahatany izay misafidy azy dia manintona voalohany indrindra ny vidiny, saingy ny kalitaon'ny serivisy sy ny lazan'ilay orinasan-dia dia manana andraikitra lehibe. Tena tokony hojerenao ireo antony ireo rehefa misafidy fitsangatsanganana, raha liana amin'ity fomba fitsangatsanganana ity ianao.
Ary koa ... raha tianao ny fitsangatsanganana tsy miankina, dia ny bisy, ho fitaovana fivezivezena eo amin'ny firenena (ao amin'ny tanibe), dia safidy tsara ara-toekarena 😉